Flower Storm ပနျးပှငျ့မုနျတိုငျး -
Why You Should Work With an Agent Who Knows About Investing in Colorado Springs - Professional hybrid agent investors are licensed real estate agents and highly experienced property investors who have combined their professions. They pro...
အောငျဆနျးစုကွညျ-ကဗြာ (ပါဠိ) - ကဗြာအောငျဆနျးစုကွညျပါဠိဘာသာပွနျ – နတ်ထိ #mothersday
‘A Memory of My Grandparents’ Special Video for my grandma’s Birthday - ('A Memory of My Grandparents' by Junior Win) 1st May of 2022 was my grandmother, Khin Myo Chit’s 107 birthday. I made this video in my channel, for the...
အိမျအ ပွနျ - ညို မွသှေး27/4/2022 ======= ဘာမှ ‌‌ပွောငျးလဲမသှားဘူး သူက အတိတျ‌တှကေိုလုံးစေ့ ပတျစေ့ မှတျမိ ထားသူ သူတို့ ကလေးတသိုကျသဈကိုငျး‌ခွောကျတှနေဲ့...
The Cloud Eater: A Poem for the Displaced People of Burma - Burmese grandma smoking cheroot, watercolor, by Kenneth Wong As Burma's anti-coup movement reached its 10th month, the Army intensified its assault on the...
ကွန်ပြူတာနည်းပညာတော်လှန်ရေးသုို့ ခြေလှမ်းများ ၁၉ ဂျူနီယာဝင်း - ကွန်ပြူတာနည်းပညာတော်လှန်ရေးသုို့ ခြေလှမ်းများ ၁၉ ဂျူနီယာဝင်း (Dream Machine Cover) (20...
- Burma news wrap--MAH in Kachin State-- 40 SAC killed, hostages kept etc, AAPP wins McBride Peace Award, Rangoon,Dawbon Dalan MAH. Myitkyina, Pado Mahn...
ငါက..လန့် ဖျန့် ပြီး အတောင်ခတ် လိုက် မိတာပါ..
လေမတိုက် ပဲ.. သစ်ရွက် တချို့.. ကြွေကျ သွားတယ်။
ဟိုးဖက်က.. ငှက် တဆုတ်.. အုပ်ဖွဲ့.. ပျံသန်း လာ ကြတယ်…
ဟုတ်တယ်.. ဒီလောက် အချစ်ကြီး တဲ့.. အောက်ချင်း ဖို ကို..
ငါမို့.. မေ့လျော့ ခဲ့တာ..
အတွေးတွေ နင်းကန် သောက်ထားတော့.. အိပ်ချင်မူးတူး
ဟုတ်ပါ့ကွယ်..လှပ သွယ်နွဲ့ ကြိုးကြာ လည်း မပါခဲ့…
ဇင်ယော်.. ပျံလွှား.. ကမ်းခြေတလွှား ..ဘယ်တော့မှ မနားတဲ့ ငှက်တွေ..
ဇီဝဇိုး..ဇီဇ၀ါ.. ၀ဇီရာ.. (အို).. ငါလဲ..ဇဝေဇ၀ါ တွေ ဖြစ်ကုန်ပေါ့..
သူ့ ရင်ထဲမှာ..မခံစားနိုင်သမျှ.. အံ..အံ ကျ ရင်း..
အဖိုးထိုက် တဲ့..ရင်အနာ တွေ..
ဒဏ္ဍာရီ ထဲက.. ဗျိုင်းမ လေး လို..
ကိုယ့် အတောင် ကိုယ် နှုတ်..တဘ၀ စာလုံး နာကျင် ပြီးမှ
ယက်လုပ် ရတဲ့.. အလှဆုံး ခြုံထည်.. ဘယ်သူ ဆင်မြန်း ဖို့ လဲ..
တကယ်ဆို…ငှက်ကြီး ၀န်ပို လို.. ငါက..၀န်မပို ချင်သူ..
၀န် ဆိုသမျှ.. ဖြစ်နိုင်ရင်..ငါ့ပုခုံး တွေ တောင်.. ကျုံ့ ထားချင်တာ..
မိုးပြိုမှာ ကြောက်.. နေပေါက် မှာ..စိုး…လကြပ် တော့.. ထိတ်
တစ်တီတူး တကောင်.. ခြေ ထောက်မထား ရဲလောက်အောင်..
ထောက်..မ.. ထား တဲ့.. ပထ၀ီ မြေကြီး ကတောင်.. ဘယ်သူ ရယ်လို့ မှ မထောက်ထား ..
တကယ်ဆို.. ဘာငှက် ဆိုတဲ့.. အထောက်အထား လဲ..မလိုအပ်လှ ပါဘူး..
အိုး.. အဲဒီ လင်းဆွဲ တွေကို.. သိတာပေါ့ရှင်..
သရေခေတ္တရာ နှုတ်ခမ်း ..ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းပါး က.. အဲဒီ ညောင်ပင်အိုကြီး ကို
ကျမ တို့ ငယ်ငယ် က.. အခါများစွာ အံ့ ငေး ဘူးခဲ့...
နေ့အလင်းရောင် အောက်မှာ တောင်.. ကိုယ့်ကို ကိုယ် အမှောင်ချ..
လောကကြီးကို ဇောက်ထိုး မြင်ကြတဲ့.. သင်း တို့ တွေ..
ဒီ အပင်ကြီး အိုကြီးကို ..ရွှေစဉ် မျိုးဆက်.. ဘယ်ခေတ်အထိ.. ဆက် ဟီးလေးခို နေကြ လေအုံး မလဲ
ဧရာဝတီ မြစ်ရိုး တကျောက.. လှောင်ချိုင့်စံ ငှက်အပေါင်း တို့ ရေ..
တေးမသီ.. စာမဖွဲ့ နိုင်.. မင်း တို့ တွေ လည်း ..အတောင် ညောင်းနေရှာ ရော့…
ငါကတော့..စိတ်ပြေလက်ပျောက်...အတောင် ခတ် လိုက်ပါရဲ့..
နေ့အလင်းရောင် အောက်မှာ တောင်.. ကိုယ့်ကို ကိုယ် အမှောင်ချ.. လောကကြီးကို ဇောက်ထိုး မြင်ကြတဲ့.. သင်း တို့ တွေ..
ဒီ အပင်ကြီး အိုကြီးကို ..ရွှေစဉ် မျိုးဆက်.. ဘယ်ခေတ်အထိ.. ဆက်မှီခို နေကြ လေအုံး မလဲ
ညီမ ကေ ရေ ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာလေး ရင်ကို ထိထိရှရှ ခံစားရပါတယ် ကျေးဇူးပါ
ဟုတ်ပါ့ မကေ ... အတော် ကြက်သရေတုံး တဲ့ လင်းဆွဲ တွေ ..
ကြိုက်တယ် ကေ....။ မိုက်တယ်...:)
ဇီဝဇိုး..ဇီဇ၀ါ.. ၀ဇီရာ.. (အို).. ငါလဲ..ဇဝေဇ၀ါ တွေ ဖြစ်ကုန်ပေါ့..သူ့ ရင်ထဲမှာ..မခံစားနိုင်သမျှ.. အံ..အံ ကျ ရင်း.. အဖိုးထိုက် တဲ့..ရင်အနာ တွေ..
ဒီကဗျာလေးကတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေပဲ ခံစားတတ်မယ့် ကဗျာလေးပဲ။ ဗမာတွေဟာ ကမ္ဘာမှာ ဘယ်လူမျိုးနဲ့ မှ မတူတဲ့ ခံယူချက်၊ ခံစားမူ့ တွေ ရှိကြတယ်လေ။ အာနာတတ်တာ ၊ ကိုယ်ချင်းစာတတ်တာ၊ ကူညီတတ်တာ၊ ရှက်ကြောက်တတ်တာ။ ဒါတွေမရှိရင်တော့ သတိထားရမှာ မြန်မာလူမျိုးကနေ လင်းဆွဲးဘဝ ရောက်သွားရမှာပဲ။